काठमाडौंमा बालेन र भरतपुरमा रेनुको अग्रता फराकिलो, अरुमा को अगाडि ? – Annapurna Post News
May 21, 2022 sujaLeaveaComment on काठमाडौंमा बालेन र भरतपुरमा रेनुको अग्रता फराकिलो, अरुमा को अगाडि ?
काठमाडौं । देशका ६ महानगरपालिका मध्ये विराटनगरको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । एमालेका सागरकुमार थापालाई हराउँदै विराटनगरको महानगरमा नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइरालाले ३० हजार १७० मतका साथ निर्वाचित हुनुभएको छ ।
यता काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदका स्वतन्त्र उमेदवार बालेन्द्र साहले फराकिलो मतान्तरसहित अग्रस्थान कायम राख्नुभएको छ । यो समाचार तयारपार्दासम्म बालेन ३३ हजार २६० मतसहित अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ ।
यस्तै नेकपा एमालेका केशव स्थापितले १७ हजार ६९२ मत ल्याउँदा काँग्रेस उम्मेदवार सिर्जना सिंहले १७ हजार ५७९ मत ल्याउनुभएको छ । यस्तै उपमेयरमा एमाले उम्मेदवार सुनिता डंगोलले २४ हजार ५९२ मत ल्याउनुभएको छ ।
उता ललितपुर महानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवार नेपाली काँग्रेसका चिरिबाबु महर्जन अगाडि हुनुहुन्छ । महर्जनले २२ हजार ८२० मत ल्याउनुभएको छ । नेकपा एमालेका उम्मेदवार हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले १३ हजार १२४ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
उता चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर पदको उम्मेदवार रेनु दाहाल अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ । रेनुले २७ हजार ४१२ मत ल्याउनुभएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । उहाँलाई पछ्याइरहनुभएको एमालेका विजय सुवेदीले २२ हजार २७९ मत ल्याउनुभएको छ ।
यस्तै पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा एकिकृत समाजवादीका धनराज आचार्य अगाडी देखिनुभएको छ । आचार्यले ३२ हजार ४८० मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेकपा एमालेका कृष्ण थापाले २९ हजार ४१ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
यस्तै विरगन्ज महानगरपालिकामा जनता समानवादीका राजेशमान सिंहको अग्रता कायमै छ । सिंहले २४ हजार ९६४ मतकासाथ अग्र स्थान कायम राख्नुभएको छ भने उहाँलाई एमालेका विजयकुमार सरावगीले १२ हजार ८७४ मतका साथ पछ्याइरहनुभएको छ ।